Home » Lahatsoratra farany farany » LGBTQ » 2021 Voninahitra ho an'ny IGLTA Fifanarahana manerantany momba ny faha-37
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Kolontsaina • Hospitality Industry • Zon'olombelona • LGBTQ • Vaovao momba ny indostria fihaonana • fivoriana • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Tompondaka amin'ny fizahantany LGBTQ + Matt Skallerud, mpiara-dia amin'ny fitsangatsanganana LGBTQ + malaza Annette Kishon-Pines sy ny faran'ny herinandro Black Black Pride Weekend dia homem-boninahitra mandritra ny Fifanarahana Iraisam-pirenena faha-37 an'ny IGLTA.
Tompondakan'ny fizahan-tany LGBTQ + hatry ny ela Matt Skallerud dia hahazo ny lokan'ny Hall of Fame ao amin'ny Hanns Ebensten.
Angano amin'ny fizahan-tany sy mpiara-dia amin'i LGBTQ + mafana, Annette Kishon-Pines no hahazo ny loka Ally voalohany an'ny IGLTA.
Atlanta Black Pride Weekend dia hahazo ny loka 2021 Pathfinder an'ny IGLTA.
Ny fivoriambe faha-37 taonan'ny IGLTA dia natao tamin'ny 8-11 septambra, tamin'ity taona ity izay niseho voalohany tao Atlanta, Georgia
Andry telo an'ny fizahan-tany LGBTQ +, marketing ary fanatanjahan-tena - Matt Skallerud an'ny Pink Media, Annette Kishon-Pines an'i Belmond ary faran'ny herinandro Black Black Pride - no hahazo amin'ity taona ity IGLTA Voninahitra. Voafidian'ny filankevi-pitantanan'ny fikambanana, ireo loka ireo dia omena olona na orinasa manolo-tena hanatsara ny tontolon'ny tontolo Mpandeha LGBTQ +. Ny voninahitra IGLTA dia haseho miaraka amin'ny fanohanan'ny Visit Visit Philadelphia amin'ny Fifanarahana eran-tany faha-37 an'ny IGLTA, napetraka ho an'ny Hotel Midtown, Atlanta, 8-11 septambra.
Tompondakan'ny fizahan-tany LGBTQ + efa hatry ny ela Matt Skallerud dia handray ny lokan'ny Hall of Fame ao amin'ny Hanns Ebensten, notondroin'ilay lehilahy heverina ho rain'ny fitsangatsanganana gay, ary nomena ny mpikambana IGLTA miavaka isan-taona ny voninahitra nomena azy. Skallerud, filohan'ny Pink Media, dia fantatry ny besinimaro sy hajaina amin'ny asany tsy misy fitsaharana amin'ny indostrian'ny fizahan-tany sy ny marketing, ary iray amin'ireo manampahaizana manandanja indrindra amin'ny varotra fizahantany LGBTQ +. Nandritra ny 20 taona mahery, Skallerud dia nanampy ireo orinasa isan-karazany hanatratra ny mpanjifa an-tserasera LGBTQ + ary mifantoka amin'ny fanavaozana manerantany amin'ny fividianana doka fandaharana, ny tambajotra sosialy ary ny haitao Web 2.0. Filohan'ny filankevi-pitantanana IGLTA teo aloha, izy dia hery mahazatra amin'ny Fivoriambe manerantany isan-taona an'ny vondrona, izay nanao fampisehoana marketing amin'ny media sosialy ho an'ny mpanatrika. Izy koa no namorona ny hetsika fampitam-baovao voalohany tao anatin'ny fivorian'ny IGLTA tamin'ny 2008 tany Las Vegas.
Angano amin'ny fizahan-tany sy mpiara-dia amin'i LGBTQ + mafana, Annette Kishon-Pines no hahazo ny loka Ally voalohany an'ny IGLTA. Ity voninahitra ity dia omena olona iray, orinasa na fikambanana izay, na dia tsy LGBTQ + aza, dia naneho fanoloran-tena maharitra amin'ny fandresena ny dia lavitra, manampy amin'ny fanatsarana ny zavatra niainan'ireo mpandeha LGBTQ + manerantany. Kishon-Pines dia nandany efa ho efa-polo taona tao amin'ny vondrona mpivaro-tena Belmond malaza, niasa ho mpitantana ny asany ary avy eo talen'ny varotra manerantany ho an'i Amerika. Tamin'ny taona 2015 dia notendreny ny talen'ny varotra LGBTQ voalohany an'ny Belmond, ary herintaona taty aoriana dia nanara-maso ny famoronana ny LGBTQ Advisory Board, izay karazany voalohany amin'ny orinasa. Nandritra ny taonany tao Belmond, Kishon-Pines dia nanolotra fanohanana ara-tantara ho an'ny maro tsy tambo isaina Fitsangatsanganana LGBTQ + mpikarakara, fikambanana mpiaro ny zon'olombelona ary fikambanana mpanao asa soa, manompo amin'ny maha-mpiara-miasa eo amin'ny sehatry ny fizahantany manerantany.
Atlanta Black Pride Weekend - iray amin'ireo fankalazana Black Pride lehibe indrindra eran-tany - dia hahazo ny loka 2021 Pathfinder an'ny IGLTA, natolotra ho an'ny olona iray, orinasa, na fikambanana iray izay misy fiatraikany lehibe eo amin'ny toerana halehany, ary mampiseho ny fenitra ambony indrindra amin'ny hafanana sy fandraisana olona an'ny Fiarahamonina LGBTQ +. Ny satroboninahitry ny hetsika dia ny Fetiben'ny Vondron'olona Mafana Manandanja, izay manome hetsika fidirana an-kalamanjana maimaimpoana feno mozika, fialamboly, sakafo ary fialamboly, mikendry ny hampiroborobo ny fifandraisana, hanome maodely tsara, hanome hery ny olona rehetra ary hanoherana ny fitsarana an-tendrony ao anatiny ny LGBTQ + sy ireo vondrom-piarahamonina mpiara-dia. I IGLTA dia manohana ny festival festival Heat Heat amin'ity taona ity, miaraka amin'ny fivoriambeny.
Ny fivoriambe faha-37 taonan'ny IGLTA dia natao tamin'ny 8-11 septambra, tamin'ity taona ity izay niseho voalohany tao Atlanta, Georgia.